Dawladda Uu Ka Dhab Yahay La Dagaallanka Musuqmaasuqu Waa In Ay Talooyinkan Raacdaa – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Dawladda Uu Ka Dhab Yahay La Dagaallanka Musuqmaasuqu Waa In Ay Talooyinkan Raacdaa
Hargeysa (Geeska)- Hay’adda daahfurnaanta ee caalamiga ah oo ka sahqaysa la dagaallanka iyo dabagalka musuqmaasuqa, ayaa war ay dhowaan soo saartay ku sheegtay habka ay is leedahay waa loola dagaalami karaa dhaqankan cudurka noqday.
In xasaanadda la tirtiro:
Meelaha ay dalalkaasi wanaajiyeen waxaa ka mid ah, in xogta miisaaniyadda laga dhigo mid daahfuran, (Dakhliga iyo kharashkuba cad yihiin), arrintaas oo ka hortag u ah in si qaldan loogu takrifalo khayraadka iyo maaliyadda qaranka.
Dalalka guusha ka gaadhay madax jebinta musuqmaasuqu waxa ay caan ku yihiin dhaqan xeeldheer oo ah furfurnaan xukuumadeed, xorriyad warbaahineed, daahfurnaan maaiyadeed iyo maamul, iyo in xogtu noqoto mid la heli karo oo aan dadka laga qarin. In xogtu noqoto mid la gaadhi karaa waxa ay kordhisaa waxqabadka hay’adaha dawladda, waxa ay kor u qaaddaa heerka ka qaybgalka dadweynaha ee hawlaha qaranka.
Daboolidda galdaloolooyinka dawladda